एकै नजरमा महिलाको के के कुरा हेर्छन् पुरुषले ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३१, २०७३ समय: ९:१७:२७
काठमाडौँ । महिला र पुरुष एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भनिन्छ । महिला बिना पुरुष र पुरुष बिना महिलाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यति निकट सम्बन्ध भएका यि जोडी मध्ये एउटी महिलाको कुन कुन कुरामा पुरुषले विशेष ध्यान दिन्छ त ? बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनमा पुरुषले एकै नजरमा महिलाबाट मिठो एक मुस्कानको अपेक्षा गरेको हुन्छ । त्यो मुस्कानबाट नै लट्ठ हुने उसको महिलाहरूको स्वरलाई विशोष ध्यान दिएको हुन्छ । जवान उमेरमा प्रवेश गरेका युवतीको जवानी र प्रजनन स्वास्थ्यलाई थाहा पाउने विश्वसनीय आधार भएकाले पनि पुरुषहरु महिलाको आवाजमा लट्ठीने गर्छन् ।
त्यस्तै पहिलो नजरमा नै पुरुषले महिलाको हिपलाई बढी ध्यान दिएर हेर्छन् । यदी तपाईको पेट हिपभन्दा सानो छ भने यसले प्रजनन अवस्थालाई इंगित गर्छ र पुरूषहरुले यसको निकै ख्याल राख्दछन् ।पुरुषले शरीरको अरू भागहरूभन्दा आँखामा बढि ध्यान दिन्छन् । पहिलो नजरमा पुरुषले तपाईको आँखासँग आँखा जुधाउन चाहान्छन् ।
त्यस्तै एकै नजरमा पुरुषले हेर्ने महिलाको अकौृ कुरा हो स्त्रीको कपाल । पुरुषले स्त्रीको कपाल खुल्ला छ कि बाँधिएको छ भनेर विशेष चासो दिने गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । आफूलाई मनपरेको महिलाको कपाल खेलाउन पुरूषहरूको चाहना हुने हुँदा पुरूषहरूले यो कुरा पहिलो नजरमा नै याद राख्छन् । मिडिया एनपीबाट